Stations Railway Beautiful Inta badan Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > Stations Railway Beautiful Inta badan Yurub
Life waa ah oo ku saabsan safarka halkii ay ka caga, iyo in ay dhacdo ka mid ah saldhigyada tareenka ugu quruxda badan – in ku yidhi run ahaantii waa run. Inkasta oo dadka safarka ah ugu soo dhowaadaan saldhigyada tareen bar bilow u ah in ay safar, waxaad ka heli doontaa in saldhigyada tareen kuwanu waa run ahaantii aan la ilaawi karin. Sidaas, sababta ma waxaad eegno saddex ka mid ah saldhigyada tareenka ugu quruxda badan ee Europe?
saldhigyada tareenka Beautiful qaado tirada 1 – Strasbourg Gare The, Strasbourg, France
boosteejada tareenka France Strasbourg
U dhow xadka bariga France ayaa la Germany, ku taala Strasbourg waa saldhigga tareen Strasbourg. Waa kan labaad ee ugu weyn dalka, oo lagu doodi karo kuwa ugu quruxda badan.
tareenka waa dhisme casri ah galaas on baxsan. Sidaas, marka aad gudaha talaabo, aad iftiin bay arki doonaa, meel hawo leh, iyo quruxda taariikheed ee saldhigga gudihiisa. tareenka waxa uu leeyahay badan oo taariikhda. Waxaa la furay 1846 iyo dhisay in 1883. element galaas The qurux badan fekrado aad arki doonaa ayaa lagu daray in 2007 si ay u ilaaliyaan saldhigga mid taariikhi ah.
Maxay kula tahay waxaa ka mid ah? waa Strasbourg booqo?
boosteejada tareenka Belgium Antwerp
Eraygii Grand uusan xitaa ma bilaabaan inay sharaxaad ka saldhigga tareen dhexe Antwerp. Yaabka neo-baroque wuxuu u muuqdaa mid u eg a kaniisad ka badan xarunta safarka. Station tareenka ayaa sidoo kale kasoo muuqday qol sugitaan oo laylyan marmar ah oo dhagax dhigay, qoreysa saacad aad u weyn, waxaana lagu daboolay qubbad weyn.
Tani quruxda Belgian la dhisay at codsiga of King Leopold II iyo waa nala muddo ka badan 110 sano. Waxaa hadda marti tareenada, tareenada Intercity, iyo Thalys tareenada-xawaaraha sare. Tani waxay xaqiiqdii waa mid aadan rabin inuu seego!
Dad badan ayaa ka fiirsan Antwerp saldhigga tareenka inuu noqdo saldhigga tareenka ugu quruxda badan dhammaantood.
boosteejada tareenka Sao Bento, Porto, Portugal
boosteejada tareenka Portugal Porto
Tani xarunta tareenka si fudud waa qurux badan iyo ahaa asal ahaan ka Sao Bento de Ave-Maria Convent iyo From ka baxsan, safra arki doontaa in dhismaha uu leeyahay qurux a PSG-style tolnimo dhagax.
gudaha waa abaalmarinta dhab ah in kastoo! Waxaa jira 20,000 dusiyeen kuwaasi oo sheekada ka Portuguese historiyo, sida Battle of Valdevez iyo Conquest of Ceuta. Artist Jorge Colaço rinji ka dusiyeen for 14 sano iyo rijiyeeyay ka helay dhamaystiray 1916. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in ay ka maqnaan shaqada this farshaxanka ama tareenka! 😉
Waan idin soo booqday mid ka mid ah saldhigyada tareenka u qurux badan? na Tweet sawiradaada @SaveATrain Diyaar u ah in aad ballansato kaydkaaga soo socda? Markaasaa booqo www.saveatrain.com
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropes-most-beautiful-railway-stations%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#wadooyinka tareenka TrainStation tareen safarka safarka travelbelgium travelfrance travelportugal